6 Maitiro Akanakisisa Ekuwedzera Iyo Return pa Investment (ROI) Yenyu Email Kushambadzira | Martech Zone
Paunenge uchitsvaga nzira yekushambadzira ine yakanyanya kudzikama uye inofanotaura kudzoka pakudyara, iwe hautarisire kupfuura email kushambadzira. Kunze kwekunyatsogoneka, zvinokupa zvakare kumashure $42 pa$1 yega yega inoshandiswa pamishandirapamwe. Izvi zvinoreva kuti iyo yakaverengerwa ROI yeemail kushambadzira inogona kusvika ingangoita 4200%. Mune ino blog positi, isu tichakubatsira iwe kunzwisisa kuti email yako yekushambadzira ROI inoshanda sei - uye maitiro ekuita kuti ishande zvirinani.
Chii chinonzi Email Marketing ROI?
Email yekushambadzira ROI inovhara kukosha kwaunowana kubva kune yako email mishandirapamwe uchienzaniswa nekukosha kwaunoshandisa pavari. Aya ndiwo maziviro aunoita kana mushandirapamwe wako uchishanda, unosanganisira meseji chaiyo, uye inokwezva mhando chaiyo yevatengi - kana kana yave nguva yekumira uye kuyedza imwe, inoshanda nzira.
Maitiro eKuverengera Email Kushambadzira ROI?
Iwe unogona kuverenga ROI yako kunze kuburikidza neyakapusa formula:
Ngatitii, iwe unoshandisa mari inosvika zviuru gumi zvemadhora pakugadzirisa zvakanaka mabhokisi ako etsamba, kunyora matemplate, uye kutumira maemail ekushambadzira kune vashandisi vako - iyi ndiyo Yako Yakashandiswa Kukosha kana huwandu hwemari yaunodyara mune yako email yekushambadzira chiteshi.
Iwe unowana $300,000 kubva kune vatengi vakashandurwa kuburikidza nemishandirapamwe yako mumwedzi. Iyi ndiyo Yako Yakawana Kukosha, aka mihoro yako kubva kune yako email yekushambadzira mishandirapamwe mukati meimwe nguva nguva. Iwe une zvinhu zvako zviviri zvakakosha ipapo, uye mashiripiti anogona kutanga izvozvi.
Saka, sekuratidzwa kwazvinoita, yako avhareji ROI kubva kumushandirapamwe wako wekushambadzira imadhora makumi maviri nemapfumbamwe padhora rega rega raunobhadhara. Wedzera iyo nhamba ne 29. Iye zvino unoziva kuti kushandisa $ 100 pamishandirapamwe yekushambadzira kwakaunza iwe 10,000% kukura kwakaita kuti uwane $ 2900.
Chii Chinoita Kuti Email Kushambadzira ROI Ikoshe zvakadaro?
Pane chikonzero chiri pachena - iwe unofanirwa kuziva kuti iwe unogashira kupfuura iwe yaunopa. Kunzwisisa kudzoka kwako pakudyara kunokubvumira kuti:
Wana mufananidzo chaiwo wevatengi vako. Kana iwe uchiziva kuti ndeipi email yekushambadzira nzira inoshanda, iwe unoziva zvinokurudzira tarisiro yako uye inovaita kuti vaite sarudzo yekutenga. Saka, unoita zvikanganiso zvishoma kana uchizivisa mutengi wako vanhu kana kugadzirira mameseji ekushambadzira - uye kuderedza nguva inodiwa kuti tarisiro ienderere mberi nepasi pekutengesa.
Wedzera webhusaiti yako traffic. Paunenge uchida kushanya kwakawanda kune webhusaiti yako, SEO ndicho chinhu chekutanga chinouya mupfungwa. Nekudaro, SEO inotora nguva uye matani ebasa isati yatanga kutyaira mhinduro. Mishandirapamwe yekushambadzira neemail inogona kukurumidza kusuma vateereri vako kune yako yepamhepo portal nekukurumidza uye zviri nyore nekupa chimwe chinhu chakakosha kune mumwe nemumwe anogamuchira, uchivakurudzira kuti vatarise iwe kumusoro, uye kuongorora zvese zvinyorwa zveruzivo nezvewe nemhando yako.
Segment your target vateereri. Kunyanya iwe paunonzwisisa vako vangangove vatengi, zviri nyore kwauri kuti ugadzire zvakanangwa zvemukati uye nekupa chimwe chinhu chakasarudzika kuboka rega rega. Inogona kunge ine vatengi vatsva kana vanyoreri venguva refu, uye iwe unogona kusarudza vatengi vanoteerera uye kukurudzira vanonyanya kuita vatengi. Izvi zvinoreva kuti uchakwanisa kuvaka shanduko dzako uye kudzvanya-kuburikidza nemitengo isingaite.
Ziva zvimwe zvingangoita zvemunhu. Kusarudzika kunokosha zvakanyanya mukubatsira uye kubudirira kwemaemail ekushambadzira mishandirapamwe. Sekureva kwaSmart HQ, vanosvika makumi manomwe neshanu muzana evatengi vanongopindirana nemaemail ekushambadzira emunhu.
Maitiro Akanyanya Ekuwedzera Email Kushambadzira ROI
ROI yako haina kuiswa mudombo, ndizvo here? Inogona kugadziriswa uye kuwedzerwa nekutora matanho akakodzera. Saka, kana iwe uchinge wawana ROI yakakwana, unogona kutanga kushanda pakuvaka budiriro yako nekuona akakosha mapoinzi eemail ako ekushambadzira mishandirapamwe uye kupinza kukosha kwakawanda mavari. Kune nzira dzakawanda dzekuzviita, uye isu tinozojekesa mamwe maitiro anonyanya kufarirwa.
Maitiro Akanakisisa 1: Shandisa Simba reData
Iwe haugone kuverenga pfungwa dzevateereri vako - uye dai kuverenga kwaigona kuitika, tingadai tichiri kupokana nazvo zvakasimba. Zvese zvaunoda zviri mumadhamu maviri edata. Ose ari maviri anowanikwa kwauri uye anosanganisira ruzivo rwakakosha mune yako tarisiro 'maitiro.
Webhusaiti yevashanyi data. Vashandisi vanouya kuwebhusaiti yako uye kudzidza peji rega rega vanogona kuve vatengi vako vakanyanya - chero iwe uchikwanisa kufungidzira izvo zvakabata kufarira kwavo uye kuvapa zvavanoda. Kuti uite izvi, iwe unofanirwa kuve neratidziro yezvinangwa zvavo zvakakosha, huwandu hwevanhu, uye zvavanokoshesa uye shandisa ruzivo irworwo kugadzirisa matemplate ako. Unogona kudzidza vashanyi vako vemazuva ese kuburikidza neGoogle Analytics. Icho chinhu chinofanirwa-kuva nechishandiso kune chero munhu anoda kudzidza zvakawanda nezve kunobva vashanyi vavo, peji ripi ravanoona kakawanda, vangave vashanyi venguva imwe chete kana kudzoka mazuva ese kana vhiki. Neruzivo rwakadai pamaoko ako, unozonzwisisa zvirinani kudzikisira kufarira kwevateereri vako uye kushandura vashanyi kuve vanyoreri.
Data yemushandirapamwe. Usambofa wakazvidza ruzivo rwaunokwanisa kupihwa nemishandirapamwe yapfuura. Zvimwe zvekushandisa zvinokuratidza:
Rudzi rwechishandiso chinoshandiswa kuona meseji yako;
Kana vashandisi vari ivo vanonyanya kushingaira pavanenge vachitaurirana nemaemail ako;
Ndezvipi zvinongedzo zvakakonzera kubatanidzwa kwakanyanya;
Huwandu hwevatengi vakatendeuka;
Kutenga kunoitwa nevatengi vakatendeuka.
Iyi data inoita kuti iwe upe iyo chaiyo chaiyo yekuongorora maitiro uye yakachengeteka kutaurirana kune simba pakati pevanogamuchira newe. Izvi zvinotiunza kune inotevera tsika yekusimudzira email kushambadzira ROI.
Maitiro Akanakisisa 2: Isai Hukuru Kununurwa
Iwe haugone kutaura nezve ROI kusvika iwe uine chivimbo nezvekuburitswa kwako. Hazvizvivake; iwe unofanirwa kushanda pazvinhu zvakawanda kuti uwane kuita kwakanyanya uye kuona mishandirapamwe yako ichikonzera mhedzisiro. Kuwanda kwemabhokisi etsamba aunotumira, ndiko kuwedzera matambudziko auchasangana nawo.
Kuendeswa kweemail ishoko rinoshandiswa kutsanangura chikamu cheemail chinomhara mumabhokisi evanogamuchira. Inotarisa pamaemail anopihwa mukana wekupinda mubhokisi rekutumira uye kuonekwa neanogamuchira. Izvi ndizvo chaizvo nei kuendesa email kunokosha kana uchiongorora mashandiro eemail ekushambadzira mishandirapamwe.
E-mail kuendesa kune huwandu hwakasiyana hwemamiriro anofanirwa kusangana usati waverenga meseji yako sekutumirwa uye kubatsira mukubudirira kwako.
Sender mbiri. Vazhinji vanotumira vanogona kutumira email, asi ivo chete vanotendeseka zvakanyanya vanogona kuita kuti isvike kune yavo yavanoda kugamuchira. Mukurumbira wakanaka wekutumira unobva kune ine hutano domain uye yakavimbika yakazvitsaurira IP kero, uye yakatsiga, inowirirana, uye yepamutemo bhokisi retsamba chiitiko.
Authentication protocols. Paunenge uchigamuchira maseva haugone kuona kana iyo email yakabva kune iyo domain yakaratidzwa mukero yeanotumira, meseji inotumirwa kune spam folda. Kuzivikanwa chaiko kunoda marekodhi eDNS, akadai serekodhi reSPF, siginecha yeDKIM, uye mutemo weDMARC. Iwo marekodhi anobatsira vanogamuchira kuti vaonekwe tsamba dzinopinda uye kuratidza kuti hadzina kukanganiswa kana kutumirwa pasina ruzivo rwemuridzi wedomain.
Yakanaka email kuendesa haina kumira pakutumira meseji kune ako anotarisira 'inboxes. Inosanganisira zvinotevera:
Nhamba yakaderera yezvinyoro uye zvakaoma bounces. Dzimwe nguva, uchangotumira maemail ako, unogamuchira mamwe acho kumashure, kungave nekuda kwenyaya dzenguva pfupi, senge matambudziko evhavha, kutyora yako yekutumira kuenderana kana yakazara inbox yekugamuchira (soft bounces), kana dambudziko netsamba yako yekutumira, kureva, kutumira kune isiripo email kero (zvakaoma bounces). Mabhaunzi akapfava anoda kuti udzike nekutsika-tsika kuti ugare munyasha dzeISP yako, ukuwo mabhaunzi akaomarara anogona kukanganisa zita rako semutumiri. Kuti uchengetedze kuburitswa kweemail kwakanaka, unofanirwa kuve nechokwadi kuti maemail ako haana kubhurwa.
Maemail akati wandei akananga kuInbox. Zvinoreva kuti, havapereri muTrash forodha kana kubatwa nemusungo we spam. Zvinhu zvakadaro zvinoitika nguva dzose, asi vanotumira vanoramba vari pachena kwavari, vachikuvadza nokusaziva kununurwa kwavo.
A akati wandei akavhurwa maemail/email kudyidzana. Chii chinangwa chekuti email yako iunzwe kana isina kuvhurwa? Mameseji ako anoteedzera chinangwa chaicho, uye kana chinangwa ichi chikasaitika, hapana mutsauko wazvinoita mukuunzwa kwako. Basa rako ndere kuve nechokwadi chekuti tarisiro yako inogona kuona maemail ako uye kuti ivo vari kunyatsofarira kuvhura iwo uye kuverenga zvirimo.
Saka, kana iwe uchida kuvandudza yako yekushambadzira ROI, zvibvunze iwe:
Ini ndakagadzirisa yangu email yekusimbisa mapuroteni zvinoenderana neangu email kushambadzira zvinangwa?
Ndakaita mishandirapamwe yakakwana here?
Rondedzero yangu yekutumira yakachena zvakakwana here?
Ndine maKPI ese mukuona kwangu here?
Ndine chishandiso chekutarisa mablacklists here?
Zvechokwadi, zvinotora nguva kuwana kusununguka kwakanyanya. Zvako zvazvino mhedzisiro zvinogona kunge zvakangokwana kuwana ROI yakanaka, asi kana iwe uchida kuenda zvirinani, nekukurumidza, uye kusimba, iwe unofanirwa kugara wakatarira kufambira mberi kwako, gadzirira kutora mamwe matanho, uye usambokanda mapfumo pasi pane yako. dziisa.
Maitiro Akanakisisa 3: Vaka Yakanyanya-Yakatariswa Email Rondedzero
Iri zano rinonyanya kukosha kune bhizinesi-kune-bhizinesi (B2B) email marketing. Paunotumira meseji kune mumwe munhu, iwe unoda kuti ave munhu akakodzera, akakodzera kuisa nguva yako nesimba mukati, uye anokwanisa kunyatso batsirwa kubva pane chako chaunopa. Hapana chakashata kupfuura kutumira email mushure meemail kune mumwe munhu wawakatsanangura semugadziri wesarudzo kuti azive kuti haachashanda pakambani yakanangwa! Kunyanya kusakosha kwekero pane yako runyorwa, kuderera kwako chiyero chekuvimbisa kunoenda.
Kuunganidza mamwe data akasarudzika ne kutengesa njere zvishandiso uye tsvakurudzo yakakwana inokubvumira kuti uchengetedze rondedzero yako yekutumira yakachena uye yakakosha. Kazhinji, zvinoreva kuti iwe unofanirwa kuita imwe pre-sale yekuongorora nekuenda kuLinkedIn mapeji evanhu vanotaridzika sevanoita sarudzo vakakwana, kuunganidza nekusimbisa data rekuonana. Ehe, havasi vese vane nguva yeizvi - chinhu chakanaka kuti iwe wakapa kunze zvikwata kuti zvikubatsire kunze.
Maitiro Akanyanya 4: Shandisa Zvinopfuura Imwe Sita uye Matauriro
Kutaura nezvemunhu, kana iwe uchiwedzera kuziva nezve chikamu chimwe nechimwe chevateereri vako vanogamuchira, ndipo paunowedzera kunzwisisa toni yavo uye izwi resarudzo. Mimwe yetarisiro yako inogona kunamatira kune zvimwe zvinoonekwa zvemukati, nepo vamwe vangada yakawedzera laconic maitiro. Vamwe vashandisi vanotenda muzvidzidzo zvezviitiko uye humbowo hwemagariro, nepo vamwe vachida wongororo yakadzama uye zvakawanda zvezvidzidzo zvemukati vasati vakuona semutengesi anovimbika.
Zvemukati zvinokutendera kuti utaure uye utaure nezve masevhisi ako zvine hunyanzvi, saka usazeza kuzvirega uchienda uye kushanda pamhando dzakasiyana dzezvinyorwa zvemhando dzakasiyana dzetarisiro yako, vanyoreri, uye vatengi. Waita zvakanaka kuenda chero yako templates usatyore maemail ekutaura, ane spam trigger mazwi, kana kufashukira neasina basa zvinongedzo.
Ndeapi maficha eemail yako anofanirwa kugara ari munhu?
Mutsara wenyaya. Iyi ndiyo tarisiro-yekubata kune vese vanogamuchira vanotarisa mainbox avo. Iyo yakanyanya kusarudzika yainovimbisa, iyo yakakwirira ndiyo mikana yekuti email yako ivhurwe. Mutsara wenyaya wakanyatsoenderana ibasa reunyanzvi: haina-inobtrusive, haina kunyanya kutengesa, inokuyedza nevimbiso yekukosha kwakasiyana, uye zvakajeka nezvemunhu akatumira email nezvinangwa zvavo.
Sender kuzivikanwa. Usambopa vanokugamuchira nekero kubva: zita@gmail.com. Vape zita rako, zita rako, zita rekambani yako, uye mufananidzo wako. Pasinei nechikamu chako chevateereri, tarisiro yako inofanirwa kuziva kuti vari kubata ani. Kana kero yako yeemail iri yese yavanoona, vanogona kutanga kufunga kuti vari kutaura ne bot.
Zviono. Iwe unogona kugadzirisa zvemukati kuti zvisangane nezvido zvemushandisi muruvara kana kuita kuti email yako template dhizaini iwedzere kune murume kana murume (kunyanya kana iwe uchitengesa zvinhu zvinopa kune imwe murume kana murume kana kupa mabhenefiti kune rimwe boka). Asi chenjera, kunyangwe - haasi ese eemail masevhisi anotsigira HTML fomati.
Slang uye nyanzvi jargon. Kana iwe uchiziva nezve maindasitiri nenzvimbo dzinosevenza vaunogamuchira, unonzwisisa kuti izwi rinovaridzira bhero. Naizvozvo, iwe unogona kuwedzera kujairana kune ako matemplate, uchiratidza kuti iwe unofarira zvepachokwadi nyaya dzavo dzemazuva ese uye kuziva zvavanokoshesa.
Maitiro Akanyanya 5: Chengetedza Hukuro Yako Yakagadziridzwa Yenharembozha
Sezvo tataura zvatinoda, tinofanira kubvuma zera rinofamba nefoni ratiri kurarama mariri. Vanhu havaparadzanise nharembozha dzavo nezvigajeti, vachizvishandisa senzvimbo yepasirese yeruzivo, zvirimo, uye varaidzo. Vatengi nemabhizinesi vanoshandisa zvishandiso zvavo kutenga, kutonga mafambiro avo, uye, hongu, tarisa email. Nekudaro, kana maemail ako asingagone kutariswa kubva kune smartphone, unorasikirwa nevakawanda vangangove vatengi. Wepakati mushandisi chero chinhu kunze kwemoyo murefu - kana zvichivatora anopfuura 3 masekonzi kurodha email kana kana kuverenga kwayo kuri kushoma pane inogutsa, ivo vanoivhara ipapo ipapo voenda kune mamwe mameseji akagadziridzwa.
Kuti uve nechokwadi chekuti mameseji ako ane hushamwari, rega mugadziri wako wewebhu uye art director atarise kwavari, uye ona kuti angagadziriswe sei uye awedzere kufadza mumaziso evateereri vako.
Maitiro Akanyanya 6: Shandisa Email Marketing Automation
Iyi tsika yakakosha kune bhizinesi-kune-vatengi (B2C) nzira dzekutengesa, kunyanya ikozvino kana e-commerce iri kuwedzera. Ichi ndicho chikonzero marketing automation maficha anowanzo kupihwa nevazhinji email vanopa masevhisi (ESPs) Aya maficha anoita kuti zvikwanise:
Ronga maemail. Waneta nekugara wakamirira kutumira matsamba uye mameseji ekusimudzira panguva chaiyo? Haufanire kudaro. Iwo otomatiki zvigadziriso zvinokutendera iwe kuti usarudze iyo chaiyo nguva slot, wedzera mazita ekufonera, uye zorora zviri nyore, uchiziva kuti mameseji anosvika kumabhokisi etsamba evanogamuchira pasina kunonoka.
Gadzira maemail ekutengeserana. Maemail ekushambadzira otomatiki maficha anoteedzera nhoroondo yekutenga kwevashandisi uye kugadzira ma invoice, maemail ekusimbisa, zviziviso, uye zviziviso zvinoita kuti mutengi wega wega anotendeuka akurumidze kuputira mutengi wake kana kuenderera mberi nekudyidzana newebhusaiti.
Tumira zvakasiiwa zviziviso zvengoro. Rudzi urwu rwemeseji chishandiso chine simba chekutengesa zvakare chinokubatsira kutorazve vashanyi vesaiti vasina kuita pfungwa dzavo. Inokonzereswa pese kana chinhu chawedzerwa kungoro chaiyo asi isina kuendeswa mberi, maemail engoro akasiiwa anosundidzira vashandisi kutora matanho uye kuratidza kuti sarudzo yavo ine basa.
Email Kushambadzira ROI
Imeyili yekushambadzira ROI yakakosha uye inodzoreka KPI iyo inogona kukuratidza kufambira mberi kwako neiyo email yekushambadzira nzira - uye mangani matambudziko ari kumberi. Inokuita kuti ugovane mari yako pakati pezviteshi zvekutengesa zvinobudirira sezvinobvira uye inokukurudzira kuti uedze zvakanyanya.
Tinovimba kuti maitiro atakanyora pano achakubatsira iwe kuzadzisa zvinangwa zvako zvekushambadzira uye kukukurudzira kuti upfuure zvawawana zvazvino. Kuti ukwidzise mishandirapamwe yako uye ive nechokwadi chekuti hapana ruzivo runotsvedza kupfuura iwe, isu tinokurudzira kuedza maitiro ako pamwechete Folderly. Ipuratifomu inosanganisa kuyedzwa kwekutumira email nekugadzirisa chaiko kwematambudziko espam, chaiyo-nguva yekuisa analytics, kubatanidzwa neESPs huru, nezvimwe.
Rombo rakanaka, uye dai simba reROI rive newe!
Rongedza Folderly Demo
kuburitsa: Martech Zone ane mubatanidzwa Folderly uye isu tiri kushandisa yedu yekutumira link muchinyorwa ichi.
Tags: zvakasiiwa zviziviso zvengoro yekutengaauthenticationb2b emailb2cb2c emaildata yemushandirapamwekuburitswaeemail tinya-kuburikidzaemail ctremail kuburitswaemail kubatanidzwaemail listEmail Marketingemail inovhuraemail kusvikatsambambozha personalizationemail kurongaemail chidimbuemail styleemail chinyorwa mutsaramaemail templatesemail toniemail zvinoonekwaemail warmupkunyanyamabhanhire akaomainbox kuiswaip inodziyamarketing automationnharembozha emaildzoka pakudyaraRoyikutengesa ungwarukutengesa kusvikakuronga maemailSender identitysender mukurumbirazvinyoro zvinyoromaemail ekutengeseranamushanyi data
Makumi emakore aVlad ehuchenjeri hwebhizimusi uye ruzivo rwekuvaka bhizinesi zvakamubvumira kuti abudirire kudzidzisa boka rakasiyana revaridzi vebhizinesi, uye vezvemabhizimisi mukukura makambani avo. Nyanzvi inozivikanwa munzvimbo dzekushandura tsika yesangano uye kusimudzira hutungamiriri, B2B Kutengesa, Kushambadzira, yakapedza makore anopfuura gumi ichivaka zvigadzirwa zvetekinoroji, ine kumashure mumanetiweki ekutaurirana uye yemagetsi mudziyo engineering.